[Okukhethekileyo kwasekuqaleni kwehlobo] 1.2m eyodwa ibhedi ephindwe kabini, ecaleni kweZengcuo'an yokutya okubukekayo kwisitrato sebha encinci, imizuzu emi-2 ukuya ngaselwandle lweHuandao Road/kufuphi neShapowei yeXiamen University Zhongshan Road Botanical Garden
Igumbi lakho lokulala e i-kezhan sinombuki zindwendwe onguJeff
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uJeff iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
[Cofa kumamkeli ukuze ufumane uluhlu olungakumbi] Ndijonge phambili ukukubona!
Okokuqala wamkelekile ukuba Xiamen! Indawo yethu yokuhlala sele isebenza phantse iminyaka elishumi kwaye kuphela kwendawo yokuhlala eZengcuo'an esebenza ngokwazo ngabemi bendawo yaseZengcuo'an. Indawo yethu yokulala ikwicala leNdlela i-Huandao, uhambo lwemizuzu emithathu ukusuka elwandle, kwaye iimitha ezilishumi kude sisesitrato se-snack sorhwebo, esithe cwaka kwaye sizolile, sineevenkile ezinkulu, iivenkile zeziqhamo, ii-snack bars, kunye nezixhobo ezixhotyiswe kakuhle. ecaleni kwayo. Isikhululo sebhasi sikulungele kakhulu xa uphuma.Indawo ezininzi ezibukekayo zinokufikelelwa ngokuthe ngqo.Kukho nebhasi ethe ngqo kwisikhululo seenqwelomoya.Ixabiso lilungile, likhuselekile kwaye likhululekile. Kwakhona kulula ukuthatha iteksi okanye i-Didi, eneempawu zendlela ezicacileyo kunye neendawo zokupaka ezifanelekileyo. Ngendawo yethu yokuhlala njengeziko, iindawo ezidumileyo ezibukekayo njengeYunivesithi yaseXiamen/Zhongshan Road/Gulangyu Island/Twin Towers zonke zingaphakathi kwesiqingatha seyure. Indlu yethu yokulala yakhiwe ngobuchule ngumyili odumileyo, yonke ifenitshala yenziwe ngamaplanga aphakathi kunye nomgangatho ophezulu.Zonke izinto zangasese zenziwe ngeempawu zodidi lokuqala, kwaye sixhotyiswe ngoo-anti abachwephesha bokucoca, i-WIFI yasimahla, izinto zangasese ezilahlwayo simahla, zombane. nangongxawu, Slippers, isomisi seenwele, ikhadi igumbi smart kunye nezinye izibonelelo endlwini! Izikhokelo zokungena zobuchwephesha. Indlu yabahambi inemigangatho emine iyonke, inamalwandle amakhulu anesanti, iibhulorho ze-fishbone, kunye ne-Huandao Road phambi kwakho. Wamkelekile "kwikhaya" lakho eXiamen!
Indawo yokuhlala ikufuphi neZengcuo'an Snack Street, igumbi lizolile! Igumbi lixhotyiswe nge-WIFI yasimahla engenazingcingo, izinto zangasese ezilahlwayo simahla, iketile yombane, i-slippers, isomisi seenwele kunye nezinye izinto ezisisiseko! Siyi-villa yosapho olunye olunemigangatho emine iyonke.Umgangatho ophezulu luphahla apho unokubukela ulwandle kwaye usebenze.Imbono yasebusuku yeZengcuo'an yipanoramic.Kukwakho negumbi leglasi onokufunda ngalo kwaye sela ikofu. Ndijonge phambili ekufikeni kwakho.
Indawo: Ifumaneka eZengcuo'an, ilungele ukuhamba, ngaphandle nje kwesitrato se-snack
Izixhobo ezijikelezileyo: i-snacks, ukutya, ukuthenga, iivenkile ezithengisa izinto eziluncedo, iikhemesti zonke zigqityiwe
Iindawo ezikufutshane: IYunivesithi yaseXiamen, iNtaba yasePutuo, iHulishan Fort, iZhongshan Road zonke zikufuphi, kukho oololiwe abathe ngqo, malunga nesiqingatha seyure ukuya eGulangyu.
I-snacks ekufutshane: Iti yobisi e-Zhang San ephambeneyo, sibonane ngeentsuku ezinelanga, i-Ashin ye-toast eshinyeneyo njalo njalo.
Iikhemesti ezikufuphi: izibonelelo zekliniki ezipheleleyo
I-Supermarket: izibonelelo ezijikelezileyo ezipheleleyo, zonke iimfuno zemihla ngemihla zingathengwa
Ngethuba nje iwebhusayithi inokugcina amagumbi, kwaye ibonelele ngenkonzo ye-intanethi yeeyure ezingama-24, nceda uzive ukhululekile ukuba uqhagamshelane nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Xiamen